Fan portable Airmove ao amin'ny trano fanatobiana entana - mpankafy Kale
Airmove Portable Fan ao amin'ny trano fanatobiana entana
Ny mpankafy portable Airmove dia afaka mivezivezy mora foana ao an-trano sy any ivelany miaraka amin'ny kodiarana 4, mampiasa motera PMSM izy io mba handroahana ny lelany mpankafy, izay mety hamokatra rivotra voajanahary lehibe sy mitohy. Ao amin'ny toerana mafana sy stuffy, airmove dia azo oharina amin'ny vokatry ny 20 andiana mpankafy kely, ny halaviran-drivotra mahomby mihoatra ny 24 metatra.
Ankoatra izany, ny mpankafy rehetra dia tantera-drano, dia azo miasa ara-dalàna amin'ny orana sy mando tontolo. Ny ankamaroan'ny mpanjifa dia nividy izany ho an'ny trano fanatobiana entana, atrikasa orinasa, fampirantiana lehibe ary hetsika ivelan'ny trano.
Ny feon'ny mpankafy dia tena ambany, rehefa mandeha izy dia tsy hisy fiantraikany amin'ny feo ny resaka eo akaikin'ny mpankafy. Airmove dia tena mpankafy portable mitsitsy angovo, raha mila izany ny trano fanatobianao, gymnasium ary fampirantiana dia aza misalasala manontany anay raha mila fanazavana fanampiny.